Android 12 inogona kuita kuti foni yako itambe kumumhanzi.
Android 12 ine akawanda maficha ekuti uongorore, asi chimwe chinotonhorera chingave kugona kwekuti foni yako haptic motors kuti ishande tandem neruzha rwizi. Vibration ndechimwe foni yeApple - kubva ku best phone kune vakawanda bhajeti-inoshamwaridzika foni - yatove nayo uye foni dzese dzinogona zvakare kuridza ruzha kuburikidza neyekunze mutauri. Kubatanidza izvo zviviri kunogona kutungamira kune zvimwe zvinhu zvine hunyanzvi!
Chii chinonzi haptics?
Mukati mefoni yega yega idiki mota inogadzirwa zvine mutsindo kuti ive off-balance, inonzi a mutsara resonant actuator. Kana Android ichiudza foni kuti izununguke, mota iyi inotenderera. Nekuti iri kure-balance, inodedera uye inodedera painenge ichitenderera uye kudedera uku ndiko kwatiri kunzwa kana foni yedu iri mbeveve uye mumwe munhu achifona.
Haptic mhinduro haisi diki chinhu, uye hazvisi nyore kuti uzviite nenzira kwayo.
Izvi zvinodedera zvinobatsira zvimwe zvinhu, futi. Chinhu chinozivikanwa kwazvo - uye kune vakawanda chakanyanya kukosha - chinhu chinozunguzika kana uchinyora tsamba pabhobhoyo. Haptics ndiyo imwe yenzira nhatu (dzinoonekwa uye odhiyo ndidzo dzimwe) foni yedu inogona kutipa ruzivo rwekuti iri kuita chimwe chiito. Mumuenzaniso wedu, zviri kutizivisa kuti isu takabudirira kupinda hunhu kubva kune iyo keyboard.
Haptic mhinduro yakakosha kumafoni, asi zvakare inobatsira muako Mutambo we PlayStation, zvishandiso zvinopfeka, uye kunyangwe senzira yekuwanika kune avo vane nyaya dzekunzwa.
Haptics uye odhiyo
Nyatsoteerera kune ino pfupi vhidhiyo, nerubatsiro rwe XDA Mupepeti muna Chief Mishaal Rahman uye Anwendung kubva kune akazvimiririra mugadziri uyo anoenda nezita kdrag0n. Vhoriyamu yefoni yakadzimwa asi iwe unogona kunyatsonzwa foni ichidedera munguva nekurova kana yaiswa patafura yemuti. Ndiyo haptic odhiyo yekubatanidza yeApple 12 zvizere.
Ese mashiripiti anoshanda panguva yekuteerera post-kugadzirisa uye inokonzera zero pamusoro.
Iyo app yakavakwa uchishandisa iyo nyowani Haptic Generator API inowanikwa mu Android 12, iyo zvinyorwa inotsanangura se "odhiyo post-processor inogadzira haptic dhata inoenderana nemateedzera nzira". Mumashoko akareruka, izvo zvinoreva kuti chero ruzha rwunogadzirwa runogona kukonzeresa haptic mota zvinoenderana nekuti anovandudza uye kudzima riini uye sei.
Nekuti izvi zvinoitwa panguva yekugadziriswa kweodhiyo, hazvina basa kana vhoriyamu irimo kana kudzima kana kurira kwazvo. Chimwe chinyorwa chinonakidza ndechekuti iyo API nyowani inoshanda pane iyo Pixel 4, asi kwete iyo Pixel 4a, Pixel 4a 5G, kana iyo Pixel 5. Dai ini ndaive murume wekubheja, ndaiti izvo nyaya dzinogadziriswa Android 12 isati yaburitswa zviri pamutemo imwe nguva kudonha uku.
Nepo kuona iri demo muchiito kuri kutonhorera, chii chimwe chingaitwe nacho chinonyanya kunakidza. Maviri akanaka kwazvo ekuwedzera ku Android anouya mupfungwa: mutambo uye tsika vibration mapatani.
Vazhinji vedu takashandisa Xbox kana Dreamcast uye ziva kuti chinozungunusa controller chinhu chakanaka nifty yekuwedzera. Kunyangwe iwe urikutamba wekutanga-munhu kupfura, mutambo wemujaho, ndege yekumhanyisa, kana chero imwe mhando yemutambo wekuita, kuve nemutongi anotinhira mumaoko ako kana iwe ukaita chimwe chinhu senge kupwanya mota kunogadzira mutambo uri nani.
Paunodonha uchitamba Asphalt, foni yako fanira zunza!
Iko hakuna chikonzero izvo zvakafanana hazvigone kuitwa nefoni yako. Anogadzira mutambo anogona kushandisa iyo nyowani Haptic jenareta API kukonzeresa mota kuti iwedzere kupisa kana chiitiko chikaitika. Android iri kuwana yakawanda yemitambo mikuru ye3D, uye iyo mitambo inogona kushandisa kwazvo chiitiko ichi!
Zvishoma zvishoma zvepasirese asi sezvakakosha kungave kugona kupa yakatarwa vibration pateni kana yakatarwa yekufona ichikufonera kana kukutumira mameseji. Kuva ne tsika kurira uye mameseji toni dzekutaurirana haisi itsva pfungwa. Ngatitii mushambadzi weinotevera yakakura mameseji app inoda kuenda nhanho kumberi, uye rega iwe ugozvipa zvese nharembozha uye nzira yekuzungunusa yekutaurirana. Kunyangwe paine basa rekuwedzera, iyo Haptic jenareta inoita kuti isanyanye kubatanidzwa.
Ehezve, Android vagadziri vane akawanda akanaka mazano avo, sekuona kwedu mazuva ese mune maapplication atinoshandisa uye atinoda. "Tsika" Haptics inogona kunge isinganzwika senge inonyanya kuratidza Android 12, asi ini ndinofunga ndiyo imwe inotonhorera.
Sony PlayStation 5 ongororo
Android 11 Beta inoenda inorarama yeGoogle Pixel mafoni ane Chipenga Controls API, Bubble zviziviso, uye zvimwe zvakawanda
Android (inoshanda sisitimu)